AMISOM oo sheegtay in wadada isku xerta Beledweyne iyo Jalalaqsi la furi doono – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAMISOM oo sheegtay in wadada isku xerta Beledweyne iyo Jalalaqsi la furi doono
Hiiraan Xog, Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabad AMISOM ayaa qaaday howlgal lagu furayo dhaq dhaqaaqa wadada isku xirta magaalooyinka Baladweyne iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan.
AMISOM ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitterka ku sheegay in howlgalkan si wada jir ah ay iskaga kaashanaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM islamarkana looga gon lee yahay in la isku furo jidadka isku xir Baladweyne iyo Jalalaqsi.
“Ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, waxay qaadeen howlgal wada jir ah oo kor loogu qaadayo dhaq dhaqaaqa xoriyadda, ciidamada waxay furayaan waddooyinka ugu muhiimsan ee isku xira Baladweyne iyo Jalalaqsi” ayaa lagu yiri qoraal la soo dhigay barta Twitterka AMISOM.
AMISOM ayaa sheegtay in furitaanka jidadka fududeyn doonto gargaarka bini’aadanimada.
Ciidamo ka tirsan dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhawaan howlgallo ka bilaabay wadada laamiga ee isku xirta Baladweyne iyo Buula burde kadib markii ciidamadan ay ka soo dhaqaaqeen magaalada Baladweyne iyaggoo hadda soo dhaafay magaalada Buula burde sida u sheegay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka bilaabeen Balcad islamarkaana labada ciidan ee ka soo kala dhaqaaqay Baladweyne iyo Balcad ay iskugu imaan doonaan deegaanka Fiidow oo kala qeybiya gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe.